Drafitra fanavaozana ny Grand Hotel Astoria amin'ny maha-fivorian'ny Hotel Top Hotel World Tour an'i Hotelia Bruxelles
Home » Lahatsoratra farany farany » Hospitality Industry » Drafitra fanavaozana ny Grand Hotel Astoria amin'ny maha-fivorian'ny Hotel Top Hotel World Tour an'i Hotelia Bruxelles
Awards • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Satria efa miomana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny mari-trano Grand Hotel Astoria amin'ny maha-Hotely Colossus Brussels azy, ny tetikasa dia eken'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny noho ny drafitra, ny fahitana ary ny fahamendrehan'ny rafitrano. Tamin'ny volana lasa teo, nandresy tamin'ny fifaninanana Creative Spark ho an'i Eropa ny GA Design noho ny drafitra fanavaozana ny trano fivarotana vaovao any Hotelia Brussels. Natolotry ny Top Hotel World Tour isan-taona, ny tetikasa dia nahafa-po ny masonkarena fifaninanana amin'ny maha-azo itokiana, fanavaozana ary ny fahatsapana ankapobeny ny tetik'asa.
Ny fifaninanana dia tafiditra ao amin'ny Top Hotel World Tour, andiana fihaonambe iray andro manerantany ho an'ireo mpitarika ao anatin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny.
Ny drafitr'i Corinto dia hahita ny famerenana amin'ny laoniny ny zava-malaza eran'izao tontolo izao satria ny Grand Hotel Astoria, ilay grande dame an'ny hotely Belzika, naorina tamin'ny 1909. Noraisin'i Corinto io trano banga io tamin'ny taona 2016 ary nanangana ny toerany teo aloha izy trano fandraisam-bahiny mihaja eto amin'ny firenena. Ny efamira an-trano sy ny rihana ao anaty ny trano dia haverina amin'ny laoniny tanteraka, ny sisa amin'ny trano kosa havaozina be ary amin'ny ampahany kosa haorina handraisana efitrano fatoriana 126, ao anatin'izany ny efitrano 36, ary koa ny safidy fisakafoanana, efitrano fivoriana ary izay hisy spaoro fandraisam-bahiny lehibe indrindra eto an-tanàna. Hisokatra amin'ny 2020 ny varavarany vaovao.
GA Design an'ny London, ilay orinasa ao ambadiky ny atitany ao amin'ny trano fandraisam-bahiny nahazo loka loka tany Korinto, dia naka sary an-tsaina ny hotely Bruxelles.
"Ny lisitry ny laharana farany amin'ny telo farany ary avy eo handresy, dia ny fanekena ny fizotran'ny eritreritra fatratra sy ny famoronana noforonina izay nandamina ny fanavaozana ny fananana indray," hoy i Jessica Morrison, Senior Designer ao amin'ny GA Design.
Ny trano fandraisam-bahiny no farany amin'ny andiana hotely lehibe tamin'ny taonjato faha-19 nanerana an'i Eropa izay naverin'ny Corypes Hotels. Ilay trano fandraisam-bahiny tany Korinto Hotel London izay nahazo ny loka, ny trano fivarotana tao Corinto Hotel Budapest, ilay Grand Hotel Royal teo aloha, ary ny trano fivarotana an'i Corinto Hotel St Petersburg, Rosia, dia fananana amboara tamin'ny taonjato faha-19 izay nohajaina, nohavaozina ary natombok'ireo trano fandraisam-bahiny Corsias. Ankoatr'izay, tamin'ny volana lasa teo, nanambara ny trano fandraisam-bahiny Corinto fa hiasa amin'ny Grand Hotel du Boulevard tamin'ny taonjato faha-19 tany Bucharest, Romania izy io rehefa manokatra varavarana ity tranobe manamarika ity taorian'ny fanavaozana betsaka tamin'ny 1 Desambra 2019.
Any Bruxelles, ankoatry ny GA Design, dia mitazona ny serivisin'ny mpanao maritrano Francis Metzger, tompon'ny MA2 monina any Bruxelles, izay fantatry ny asany amin'ny tranobe lova any Belzika.